Ankasina : Mpitondra môtô maty, nifandona tamin’ny fiara mpaka fako - Midi Madagasikara
DomicileFaits-DiversAnkasina : Mpitondra môtô maty, nifandona tamin’ny fiara mpaka fako
Ankasina : Mpitondra môtô maty, nifandona tamin’ny fiara mpaka fako
Tovolahy iray fantatry ny maro eo amin’ny resaka « fitness » sy fanaovana « bodybuilding » no namoy ny ainy ny alin’ny alarobia teo, rehefa nifandona tamin’irony fiarabe mpandraoka fakon’ny kaominina irony ny môtô nentiny tetsy amin’ny lalam-baovao Ankasina.
Naratra mafy ny lehilahy ary indrisy fa namoy ny ainy teny an-dalana izy, araka ny fampitam-baovao avy amin’ny pôlisim-pirenena. Tokony ho tamin’ny valo ora sy sasany alina no nitranga ny loza, tamin’iny lalam-baovao « boulevard de l’europe » eny Ankasina iny. « Avy any amin’ny rond-point Madinox ho eny amin’ny rond point Ankazomanga izy no nandona ny ilany havian’ity fiara lehibe ity », hoy ny tatitra avy amin’ny pôlisy misahana ny lozam-pifamoivoizana. Tamin’io fotoana io dia voalaza fa « nanao ny asany ny fiara lehibe iray mpandroaka fakon’ny Kaominin’Antananarivo, ka nitsivalana teo amin’ny arabe nandroaka fako », antony nahatonga ny loza. Marihina fa anisan’ny mpankafy mitondra irony môtô lehibe, na « grosse cylindrée », irony ity tovolahy namoy ny ainy ity. Ary izany karazan-kodiarandroa izany mihitsy no nentiny tamin’io fotoana io. Saingy raha ny nambaran’ny namany, izay horonantsary miparitaka anaty tambajotra azo, dia tsy azo lazaina velively ho nandeha mafy izy tamin’ny fotoana nitrangan’ny loza, raha hoe jerena amin’ny tanjaky ny môtô nentiny.
Mitera-doza. Raha ny fitarainan’ireo mpampiasa lalana mahakasika ireny fiarabe mpandroaka fako ireny tokoa dia efa tsy tambo isaina. Fitsivalanana eny am-povoan’arabe, fibahanana fifamoivoizana ary fisetrasetrana amin’ireo fiara madinika sy môtô mihitsy aza indraindray, izay tena mitera-doza mihitsy. Izao moa dia niafara tamin’ny famoizana ain’olona izany tsy firarahiana eny an-dalambe ataon’izy ireny izany. Mazàna dia miafina foana ao ambadiky ny hoe « miasa izahay, mandroaka fako », kanefa heverina fa tsy izany velively no entina haniratsirana olona sy tsy hirarahiana ny lalàna mifehy ny fifamoivoizana, izay natao ho an’ny rehetra, na olon-tsotra na mpiasan’ny kaominina, na olom-panjakana. Mino araka izany ny maro fa mba hisy ny fandraisana andraikitr’ireo tompon’andraikitra misahana ireny fiarabe mpandroaka fako amin’izay taorian’izay loza izao.
Raha ny mahakasika ity loza tetsy amin’ny « boulevard » ity moa dia efa nandray ny andraikiny ny teo anivon’ny pôlisim-pirenena ary nitazona avy hatrany ny mpamilin’izany fiara izany, mba hatao fanadihadiana. Ary aorian’izay ny mety hanolorana azy eny anivon’ny Fampanoavana, tahaka ireo mpamily rehetra nanao lozam-pifamoivoizana nahafaty olona.